कीर्तिमान तोड्दै १४ वर्षे किशोरले उडाए जहाज उहाँ लाई सम्मान स्वरुप १/१लाइक गर्नुहोला। - Tanahu Post
कीर्तिमान तोड्दै १४ वर्षे किशोरले उडाए जहाज उहाँ लाई सम्मान स्वरुप १/१लाइक गर्नुहोला।
मानिस कति वर्षको उमेरमा पाइलट बन्न सक्ला ? युएईका एक किशोर भने १४ वर्षकै उमेरमा पाइलट बनेर रेकर्ड कायम गरेका छन् । भारतीय मूलका मंसूर अनिस विश्वको सबैभन्दा कम उमेरको पाइलट बनेर कीर्तिमान राखेका हुन् । मन्सुरले हालै सेसना १५२ नं. को उडानमा रहेको जहाज भन्डै १० मिनेटसम्म एक्लै उडाए । त्यसक्रममा उनले पूर्ण अनुभवी पाइलटले जस्तै जहाज ह्याण्डल गरेका थिए ।
यो कीर्तिमानी कार्यसँगै उनलाई प्रशिक्षार्थी पाइलटको लाइसेन्स मिलेको छ । उनलाई पाइलट प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रशिक्षार्थी पाइलटको लाइसेन्स दिएको हो । मन्सुरका बुवा भारतको नागपुरका बासिन्दा हुन् भने काका पाइलट हुन् । मन्सुरलाई सानैदेखि हवाइजहाजमा निकै चाख थियो ।
उनले खेलौना पनि हवाइजहाज वा हेलिकप्टरकै चलाउने गर्थे र एकदिन पाइलट बन्ने सपना देखेका थिए । अन्ततः लामो प्रशिक्षणपछि उनले १४ वर्षकै उमेरमा पाइलट बनेर कीर्तिमान कायम गरेका छन् । यसअघि जर्मनीका किशोरको नाममा रहेको यो कीर्तिमान मन्सुरले भंग गरेका हुन् । एजेन्सी
Prevविश्व मै नभएको माटोको सहर नेपालमा फेला पर्यो !
Next१७ वर्ष लापत्ता अर्घाखाँचीका ढालबहादुर, फेसबुकको सहायताले फेला।
म त भए खरानी !चर्चित गायक पुस्कल शर्मा र सारिकाको बिहे हुदै गर्दा पुस्कलको भयो यस्तो दुर्गती, भिडियोमा हेर्नुहोस (44)